Kornayl Wata Ciidamo Badan oo Aad u Hubaysan, Ayaa ka Baxsaday Mamul Gabaleedka Waqooyi Galbeed ee Somaliya [Somaliland] – Rasaasa News
Feb 10, 2011 Ayaa ka Baxsaday Mamul Gabaleedka Waqooyi Galbeed ee Somaliya [Somaliland], Kornayl Wata Ciidamo Badan Aad u Hubaysan
Sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamda maamul gabaleedka Somaliland, ayaa ula baxsaday Ciidamadiisii iyo saanadoodii dhinaca degaanka maamulka SSC oo uu ka soo jeedo, ka dib markii ay maalintii doraad ahayd isku dhaceen ciidamad SSC iyo kuwa SL.
sarkaalkan oo lagu Magacaabo Col Axmed Maxamed Aadan ‘dalbac’ ayaa la soo galay ciidamo gaadhaya 300 oo askari iyo 12 gaadhi oo tikniko ah.
waxaana uu sarkaalku sheegay in ay Somaliland ka soo baxeen isaga Iyo Ciidamadiisu ka dib kolkii ay u adkaysan waayeen, dhibaatooyinka ay Ciidamda Somaliland ku hayaan dadka shacabka ah ee Goboladda sool, sanaag iyo cayn, oo dhowaan au ciidamada SL dad shacab ah ku xasuuqeen deegaanka kalshaale, sida uu sheegay Dalbac.
Kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaaladda Buuhoodle, oo isugu jira cuqaal, isimo, waxgarad, ururadda bulshadda, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada buuhoodle, ayaa siweyn ugu soo dhoweeyey magaalo Madaxda Gobolka Cayn ee Buuhoodle.
Dadka soo dhoweynayey sarkaalkan ayaa kaga hortegey tuuladda shangale oo ka tirsan Gobolka Cayn, taasi oo 5 km dhanka waqooyi ka xigta magaaladda Buuhoodle ee xarunta Gobolka cayn.
kornaylka ayaa dadweynaha Buuhoodle oo soo dhaweeyey iyaga oo kumanaan uu kula hadlay fagaaraha kubadda cagta ee magaaladda buuhoodle.
sarkaalkan ayaa sheegay inuu difaacayo deegaankiisa isagoo shacabka Gobolka cayn ugu baaqay inay isdifaacaan sida uu hadalka u dhigay.
Isku soo duuboo kornaylka ayaa noqonaya masuulkii ugu danbeeyey ee ka soo jeeda maamulka SSC oo ka soo gala maamulka Somaliland iyada oo uusan xiligan jirin shaqsi ka mid ah shacabka gobollka cayn oo ka tirsan ciidamada maamulka somaliland.
xasme xasan geelle
Hosni Mubarak, oo la Sugayo in uu Saacad Dhaw Iscasilo